Fitaovana sy vokatra Apple fa tsy tokony hadinoinao ny Andro Andro voalohany | Vaovao IPhone
El Amazon Prime Day izay atao ny 21 sy 22 jona eto mba hitondra tolotra tena mahaliana antsika, angamba ny fotoana tsara indrindra amin'ny taona hividianana ireo kojakoja ireo na vokatra mahazatra an'ny orinasa Cupertino. Aza ahemotra intsony ny fividiananao, tonga ny fotoana hahazoana izay nandrasanao hatry ny ela.
Raha toa ka, Tianay ny manampy anao amin'ny fisafidianana ireo vokatra Amazon Prime Day mahaliana indrindra mifandraika amin'i Apple sy ny kojakoja amin'ny ankapobeny. Aza adino izany, afaka mankafy faran'izay betsaka ianao amin'ireo AirPods, tariby MagSafe ary maro hafa amin'ny vidiny tsara indrindra mandritra ny taona, halahelo azy ve ianao?
1 Fitaovana ho an'ny iPhone sy iPad
2 AirPods sy AirPods Pro amin'ny vidiny tsara indrindra
3 Vokatra HomeKit ho an'ny tranonao manan-tsaina
4 Ny vokatra Apple amin'ny vidiny tsara indrindra hatrizay
Fitaovana ho an'ny iPhone sy iPad
Manomboka amin'ny charger tsy misy tariby izahay MagSafe mifanaraka amin'ny iPhone amin'izao fotoana izao. Charger ity Nahatratra ny tampon'ny vidiny 35,95 euro izy. Azonao atao ny mamehy ny iPhone manontolo tsy misy tariby sy soa aman-tsara. Avelanay ho anao ny fanadihadianay mba hahitanao azy:
Mazava ho azy fa tsy maintsy miroso amin'ny iray amin'ireo vokatra Apple mahafinaritra hafa izay manintona ny sainao foana isika fa angamba mbola tsy nitady hanandrana ianao, ny Apple Pencil. Raha manana iPad mifanentana ianao dia tsy hadinonao io fotoana io, ny Apple Pencil an'ny taranaka faharoa dia 111 euro fotsiny amin'ny Amazon, fihenam-bidy efa ho 20% ho an'ity fitaovana ity miaraka amin'ny mifanentana amin'ny iPad Pro 12,9-inch (taranaka faha-3 sy faha-4), iPad Pro 11-inch (taranaka voalohany sy faharoa), iPad Air (taranaka 1).
Ny famandrihana ny fitaovantsika rehetra amin'ny fotoana iray dia mety ho olana raha tsy manaraka ny toetr'andro miaraka amin'ity fitaovana mahafinaritra an'ny Satechi. Ny orinasa miavaka manokana amin'ny kojakoja ho an'ny vokatra Apple amin'ny ankapobeny dia manome antsika izany Fantsona famandrihana tsy misy tariby 3-in-1 izay mamela antsika hankafy ny famandrihana amin'ny fotoana mitovy amin'ny: Apple Watch, iPhone ary AirPods tsy misy olana. Ny vidiny mahazatra dia € 99,99 fa manana fihenam-bidy 36% izay mamela antsika ny base amin'ny € 63,99 fotsiny
Miresaka fonosana isika izao, satria tsy maintsy arovana tsara ny iPhone mba tsy hatahotra isika. Fa ity no Elago, toy ny mahazatra, manolotra anay safidy hafa mahaliana indrindra amin'ny vidiny. Ny ankamaroan'ny tranga iPhone dia amidy amin'ity Amazon Prime Day ity, miaraka amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 50%, noho izany dia safidy tena mahaliana ny mividy iray.
AirPods sy AirPods Pro amin'ny vidiny tsara indrindra
Ny AirPods dia efa nahazo fihenam-bidy manan-danja efa nentim-paharazana ho an'ny Amazon Prime Day, manomboka amin'ny AirPods andiany faharoa miaraka amina tranga tsy misy tariby, Nahazo izy ireo fihenam-bidy tena lehibe ao amin'ny Amazon izay handany 117 euro fotsiny (179 vidiny tany am-boalohany). Tsaroanay fa izy ireo no kinova miaraka amin'ny famandrihana tsy misy tariby Qi tafiditra ao anatin'ilay tranga sy ny mari-pamantarana LED ao anaty boaty. Amiko manokana, toa ny headphones tsara indrindra amin'ny vidin'ny vola azon'i Apple hatrizay izy ireo.
Amin'ny lafiny iray, manana tolotra sarotra ihany koa isika, ny an'ny AirPods Pro. Ny headphones "premium" faran'izay betsaka amin'ny endrika TWS izay ho hitanao dia mahazo fihenam-bidy 32%, tsy misy zavatra hafa ary tsy ambany noho izany. Mijanona amin'ny 188 euro fotsiny izy ireo (€ 279 vidiny voalohany) ary handray azy ireo ianao ny ampitso raha manao ny fividiananao ianao. Afaka mankafy Spatial Audio, Dolby Atmos ianao ary ireo fiasa farany rehetra natolotr'i Apple tao anaty fonenany tamin'ny vidiny marina, tena fanalam-baraka izany.
Raha niandry ny fahazoana ny iray amin'ireo kinova AirPods ianao, raha ny marina dia tsy hahita vidiny sy antoka toy ilay hita ianao tamin'ity andro lehibe ity.
Vokatra HomeKit ho an'ny tranonao manan-tsaina
Apple sy ny HomeKit faly izay mampiasa azy ireo. Izahay dia miatrika ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra handaminana ny tranonao miaraka amin'i Alexa, ny kinova Amazon. Noho izany, te-hitondra vokatra tsara mahaliana ihany koa izahay. Manomboka amin'ny plug-tselatra izahay de Meross mifanentana amin'ny HomeKit sy ireo ambiny mpanampy virtoaly amin'ny vidiny 15 euro fotsiny, fihenan'ny 31%.
Mandeha any Eufy izahay izao, marika iray izay mahatonga ny vokatra mifanaraka amin'ny HomeKit, amin'ity tranga ity miaraka aminy fakan-tsary marani-tsaina izay mahazo fihenam-bidy 32% ary atolotra amin'ny $ 33,99 fotsiny. Azonao atao ny manara-maso ny zavatra tadiavinao, manana sensor sensor izy io, eken'ny olona ary maro hafa amin'ny vidiny izay manahirana ny fanoherana ny fakampanahy.
Izahay dia mijery karazana vokatra hafa:
Kitapo LED Meross 10m mifanaraka amin'ny HomeKit sy ny sisa amin'ireo mpanampy virtoaly, miaraka amin'ny fihenam-bidy efa ho 50%, ho an'ny 37,49 euro fotsiny no lasa fantsona LED mora indrindra mifanaraka amin'ny HomeKit.
Toetran'ny toetr'andro Netatmo miaraka amina toby anatiny sy ivelany, miaraka amina fihenam-bidy lehibe izay mampihena ny vidiny 149 euro ka hatramin'ny 109 euro.
Nuki Combo 2.0 hidin-trano izay misy sensor amin'ny varavarana, hidin-trano elektronika marani-tsaina ary kojakoja ilaina hafa, fihenam-bidy manakaiky ny 30%, manomboka amin'ny 269 euro ka hatramin'ny 199,99 euro.
Ny vokatra Apple amin'ny vidiny tsara indrindra hatrizay
Manomboka amin'ny iPhone 12 izahay amin'ny kinova 128 GB efa nahazo. fihenam-bidy 17%, ka ny vidiny ihany 793 euros amin'ny Amazon. Efa fantatrao fa manana ny antoka rehetra izy ary amin'ity tranga ity dia miloko manga manaitra ilay fitaovana.
Protagonism izao ho an'ny kinova taloha fa miaraka amin'ny antsipiriany lehibe. Ny iPhone 11 Pro Max ao amin'ny kinova 512 GB amin'ny volafotsy dia manana fihenam-bidy mihoatra ny 30%, mijanona amin'ny € 1049 (€ 1548) fotsiny miaraka amin'ireo fakantsary telo sy ny hery ilainao rehetra.
Vidio ny volafotsy iPhone 11 Pro Max (512 GB) amin'ny vidiny tsara indrindra.
Ny Apple Watch Series 3 amin'ny endriny misy GPS 38mm sy volondavenona dia mahazo fihenam-bidy 30% eo ho eo ihany, Safidy mahaliana indrindra hanombohana amin'ny kinova izay mahery ampy sy mifanaraka amin'ny WearOS 15.
Vidio ny Apple Watch Series 3 (GPS 38mm) amin'ny vidiny tsara indrindra.
Raha zavatra hafa no tadiavinao dia azonao atao ny manantona azy mivantana Apple Watch Series 6 misy GPS 44mm miaraka amina fihenam-bidy mahaliana ihany koa izao 389 euro fotsiny, iray amin'ireo vidiny tsara indrindra natolotra.
Vidio ny Apple Watch Series 6 (GPS - 44mm) amin'ny vidiny tsara indrindra.
Mifarana amin'ny King of Kings izahay, ny Apple MacBook Pro 13,3 mirefy miaraka amin'ny processeur Apple M1 sy 256 GB SSD Ao amin'ny kinova volafotsy misy fihenam-bidy izay mitondra azy hatrany amin'ny 1104 euro raha mihoatra ny 1445 Euros ny vidiny voalohany.
Vidio MacBook Pro M1 13,3 santimetatra 256 GB SSD amin'ny vidiny tsara indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Fitaovana sy vokatra Apple izay tsy tokony halainao amin'ity andro lehibe ity